महिलाका लागि पूँजीबजार लगानीको उत्तम क्षेत्र हो | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता महिलाका लागि पूँजीबजार लगानीको उत्तम क्षेत्र हो
on: October 14, 2018 अन्तरवार्ता
महिलाका लागि पूँजीबजार लगानीको उत्तम क्षेत्र हो
अम्बिका खतिवडा लगानीकर्ता
करीब १ दशकअघि अन्य व्यवसाय छाडेर पूँजीबजारमा प्रवेश गरेकी अम्बिका खतिवडा अहिले सफल लगानीकर्ताको रूपमा परिचित छिन् । आफू पूँजीबजारबाटै आत्मनिर्भर भएको उनी बताउँछिन् । महिलालाई रोजगार बनाउन पूँजीबजार उत्तम क्षेत्र भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, शेयर बजारसम्बन्धी लामो अनुभव भएकी खतिवडासँग यस क्षेत्रका विविध विषयमा रहेर आर्थिक अभियानकी प्रजिता बुढाथोकीले गरेको कुराकानी :
पूँजीबजारलाई कहिलेदेखि लगानीको क्षेत्र बनाउनुभयो ?
म पूँजीबजारमा प्रवेश गरेको ९ वर्ष पूरा भएको छ । २०६६ सालदेखि लगानी गर्दै आएको छु । त्यो समयमा मेरो आफ्नै व्यवसाय पनि थियो । प्राथमिक बजारमा खासै इच्छा नभएर मैले दोस्रो बजारबाट लगानी गर्न शुरू गरेकी हुँ ।
त्यस बेला यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वातावरण कसरी मिल्यो ?
म आफै पनि कमर्शको विद्यार्थी, परिवारका प्रायः सदस्यहरू पनि बैङ्किङ क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । मलाई नोकरीमा कहिल्यै इच्छा लागेन । त्यस कारण पनि म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ । त्यति बेला आफ्नो व्यवसायबाट सफल भए पनि समय कहिल्यै पनि भएन । समय व्यवस्थापनका लागि सहज र सफल हुने देखेरै यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुँ ।
सफल हुने आशमा गरेको लगानीले सफलता पाउनुभएको छ त ?
यो क्षेत्रमा लागेर आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ । आत्मसन्तुष्ट हुनु नै सफल हुनु हो जस्तो लाग्छ । जुन बेला म बजार प्रवेश गरेँ, त्यो बेला तल आयो । यस क्षेत्रबारे अनुभव पनि कम थियो । यस्तोमा पहिलो लगानी घट्दा केही दुःख पक्कै लागेको थियो । तर पनि नआत्तीकन सक्रिय भइरहँे । त्यसपछि मैले पूँजीबजारसम्बन्धी तालीमहरू लिन थालेँ । पत्रपत्रिका पढ्ने, नेपालको मात्र नभएर विश्वबजारको बारेमा पनि जानकारी राख्ने गर्न थालेँ । अहिले मैले आफ्ना सबैजसो आवश्यकता यही क्षेत्रको कमाइबाट पूरा गरेकी छु । पहिले खर्चका लागि श्रीमान्मा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले आत्मनिर्भर भएकी छु । आफूसँगै आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी लिन सक्ने भएकी छु । त्यसैले, यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोमा पछुतो होइन, गर्व लाग्छ ।
तपाईंको अनुभवमा पूँजीबजारमा सफल हुन के आवश्यक पर्दो रहेछ ?
पूँजीबजार मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको विषयमा जानकार हुनुपर्छ । कमर्शकै विद्यार्थी भए पनि मैले तालीमका साथै थप अध्ययनले नै यो क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न जानेकी हुँ । नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूले पूँजी र पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न सिकेर मात्र यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । आफूसँग भएको रकममध्ये सानो लगानीबाट शुरू गरे जोखीम कम हुने मेरो अनुभव छ । शेयरबजारमा आज लगानी गर्‍यो, भोलि नै नाफा हुन्छ भन्ने होइन । धैर्य गर्ने क्षमता पनि लगानीकर्तामा हुनुपर्छ । बजार घट्दैमा घाटा हुन्छ भन्ने पनि होइन । घटेकै बजारबाट पनि बुझेर लगानी गर्न सके नाफा कमाउन सकिन्छ ।
यो क्षेत्रमा लाग्न महिलालाई परिवारबाट कमै स्वतन्त्रता मिल्छ गरेको छ भनिन्छ । तपाईंले यस्तो स्वतन्त्रता कत्तिको पाउनु भएको छ ?
हाम्रो परिवारमा व्यावसायिक वातावरण छ । मलाई पूँजीबजारमा लगानी गर्ने स्वतन्त्र वातावरण मेरो श्रीमान्ले नै दिनुभएको हो । अहिले म आत्मनिर्भर बन्नुमा उहाँकै योगदान छ । किनकि, मैले पहिलो लगानी उहाँकै पैसाले गरेकी हुँ । त्यो बेला लगानी गर्नेबित्तिकै बजार घटेको थियो । उहाँले साथ नदिनुभएको भए आज म सफल हुने थिइनँ होला । यसमा मलाई परिवारको पूरा साथ र सहयोग छ ।
यो क्षेत्रमा सफल छु भन्नुभयो । कस्ता खालका सफलता पाउनु भएको छ ?
पहिलो कुरा त अहिले म मेरो कामबाट पूर्ण सन्तुष्ट छु । आर्थिक रूपमा त सफल भएकै छु । पहिलाको व्यवसायमा पैसा भए पनि मेरो व्यक्तिगत जीवन थिएन । पहिलाको व्यवसायमा विभिन्न बाधाअड्चन आइपर्थे । ५–१० दिनको समय निकाल्न पनि गाह्रो हुने गर्थ्यो । यही पीडाले नै आज मलाई यहाँसम्म ल्याएको छ । अहिले मसँग पर्याप्त समय छ । जतिबेला जहाँ जान पनि समय निकाल्न सक्छु । यो क्षेत्रमा कारोबार गर्न घरबाटै पनि सम्भव छ । त्यसैले, मैले यो क्षेत्रबाट पाएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको खुशी र सन्तुष्टि हो ।
पूँजीबजारमा सेवा प्रदान गर्ने क्रममा महिलालाई कत्तिको प्राथमिकतामा दिने गरेको पाइन्छ ?
मैले कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनी र मबीच दिदीबहिनीको जस्तो सम्बन्ध छ । हामी महिला दिदीबहिनीहरू जहिले अगाडि नै बसेर कारोबार हेर्ने गर्दछौं । अन्य क्षेत्रमा एकअर्कामा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ । मेरो अनुभवमा यो क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ । महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिएरै होला, पछिल्लो समय पूँजीबजारमा महिलाको प्रवेश बढेको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा कम शिक्षाले पनि दिनप्रतिदिनको भोगाइले सफल लगानीकर्ता बनेका पनि छन् । जो महिला दिदीबहिनी कम शिक्षाका कारण बेरोजगार भएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूका लागि रोजगार बन्न सहयोग मिल्ने क्षेत्र भनेको पूँजीबजार हो भन्ने लाग्छ । अनि अर्को कुरा, हामीले अन्य व्यवसाय गर्दा तत्काल बन्द गर्न सक्ने अवस्था हुन्न । यो यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ हामी चाहेकै समयमा बाहिरिन सक्छौं ।
आम लगानीकर्ताको हितका लागि धेरै सङ्गठन छन् । ती सङ्गठनले लगानीकर्ताको गुनासाहरू सम्बोधन गरेका छन् त ?
अहिले पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको हितका लागि धेरै सङ्गठन सक्रिय छन् । उनीहरूले लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्दै उनीहरूकै हितका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । उहाँहरूले आफैले गर्ने त केही होइन । सम्बन्धित निकायसम्म आम लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै माग पु¥याउने हो । सबै सङ्गठनहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट पूँजीबजार सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्ने कार्य गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ ।
लगानीकर्ताले पूँजी बजारसम्बन्धी नीतिगत विषयलाई कत्तिको ध्यान दिन जरुरी देख्नुहुन्छ ?
पूँजीबजारको अभिभावक भनेकै नियामक निकाय हो । यस निकायबाट जारी गरिएका नीतिनियमलाई ध्यान दिएर अघि बढे भविष्यमा आइपर्ने जोखीमबाट जोगिन सकिन्छ । हरेक क्षेत्रमा लागेपछि त्यसलाई कुन कुन कारणले असर गर्छ भन्ने जान्न एकदमै जरुरी छ ।
पूर्ण अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । सबै महिलाले अनलाइनबाटै शेयर कारोबार गर्न सक्ने अवस्था छ त ?
कुनै पनि नयाँ प्रविधि भित्रिँदा त्यसको प्रयोगका लागि समय लाग्छ । हामी पढेलेखेका महिलालाई त कम्प्युटर चलाउने बानी छैन । नपढेकाहरूको अवस्था के होला ? तर, प्रविधिको प्रयोगका लागि पछि हट्ने भन्ने पक्कै होइन । अहिलेदेखि नै यसको प्रयोग गर्न सिक्नुपर्दछ । डिजिटलको जमानामा आफै अग्रसर भएर काम गर्ने हो । यसका लागि आवश्यक सचेतना भने हामीलाई चाहिन्छ । लगानीकर्ताको पहुँच विस्तारमा अनलाइनले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा छ । नेपालका हुम्ला–जुम्ला जस्ता विकट भेटका जनतालाई पनि पूँजीबजारको पहुँचमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।
आम लगानीकर्तालाई थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
सुख, शान्ति र समृद्धिको प्रतीक महान् चाड विजयादशमी र दीपालीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण देशवासी र लगानीकर्ता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यो पर्वलाई मितव्ययिता र सभ्यताका साथ मनाउन सबैमा विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु । बडादशैंले जसरी सबै नेपालीको अनुहारमा मुस्कान छरेको छ, त्यसरी नै पूँजीबजारले पनि सबै लगानीकर्तामा खुशी ल्याउन सकोस् भन्ने कामना पनि छ । अहिले बजार अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ । बजारको भविष्य के हुन्छ, यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । यतिचाहिँ मलाई विश्वास छ– यो अवस्थामा बजारलाई मल्हम लगाउन सक्यो भने भविष्यमा पूँजीबजारको ‘हिरो’ भइन्छ ।
Very good dijju i like it 😊😊
All right but needs very much improving in stock market of Nepal.Such as deduction of percentage of interest in debt , margin lending,online trading, extension of stock market to nationally as well as internationally ie NRN involvement,happiness among investors,proper training and orientation etc
LeaveaReply to Nita bhattarai Cancel Reply
शिक्षक सेवा आयोगको अन्तरवार्ताको तयारी